Home Cayaaraha Kooxda kubadda cagta Liverpool oo shaacinaysa saxeexii saddexaad ee ay xagaagan samayso
Kooxda kubadda cagta Liverpool oo shaacinaysa saxeexii saddexaad ee ay xagaagan samayso
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa shaacinaysa saxeexii saddexaad ee ay xagaagan samayso, waxaanay heshiis buuxa la gaadhay xiddig da’yar ah oo kasoo degaya Anfield.
Liverpool oo laba maalmood ka hor si rasmi ah ula soo wareegtay weeraryahanka reer Uruguay ee Darwin Nunez oo ay £85 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Benfica ayaa waxa uga sii horreeyey xiddiga da’da yar ee khadka dhexe ee Fabio Carvalho oo ahaa saxeexii koowaad ee ay Liverpool samayso xagaagan.
Waxay haddana heshiis la gaadhay laacibka da’da yar ee difaaca uga ciyaara kooxda Aberdeen ee Calvin Ramsay oo ay da’diisu tahay 18 jir, kana ciyaara difaaca midig.
Liverpool ayaa bixin doonta £6.5 milyan oo Gini oo ay laacibkan aadka loo qiimeeyo kusoo qaadanayso, iyadoo £4 milyan oo Gini oo lacagtaas ka mid ah ay naqad hadda ah ku bixinayso Liverpool qaybta kale oo ah £2.5 milyan oo Gini na ay ku xidhnaan doonaan bandhiggiisa iyo guulaha uu la gaadho kooxdan.
Ramsay ayaa la sheegay in ay Liverpool kusoo afjarayso saxeexyadeeda xagaagan oo ay sidaa kaga bixi doonto suuqa iyadoo 11 usbuuc ay ka hadhsan yihiin waqtiga uu xidhmayo suuqu.
Carvalho iyo Nunez ayaa iyagu mar horeba kasoo degay Anfield oo dhamaystiray tijaabooyinka caafimaadka, isla markaana loosoo bandhigay warbaahinta, waxaanay hadda sugayaan inta ay kooxdu tababarka bilaabayo.
Ramsay oo ka tirsan xulka qaranka Scotland ayaa isaguna kusoo guuleystay ciyaartoygii sannadka ee da’yarta Scotland, waxaana uu noqon doonaa beddelka Trent Alexander-Arnold ee mustaqbalka dheer.
Previous articleFlorentino Perez oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in kooxdiisu ay ku Guul-darraysatay saxiixa Erling Haaland
Next articleMadaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez”ma rabto” Kylian Mbappe
(Wax badan ka ogoow) Madaxweyne Xasan oo laga dalbaday inuu GEDO...